Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo war cusub soo saaray.
May 1, 2021 Xuseen 4
Puntlandtimes (GAROOWE)-Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa munaasabadda 1-da May oo ah maalinta Shaqaalaha adduunka, wuxuu u hambalyeeyay Shaqaalaha Puntland.
“Munaasabadda maalinta Shaqaalaha darteed, waxaan u hambalyeenaya Shaqaalaha Soomaaliyeed gaar ahaan Shaqaalaha Puntland oo lafdhabar u ah horumarka socda. Waxaan bogaadinaya shaqaalaha ku jira furimaha hore, sida wiilasha iyo gabdhaha ka shaqeynaya Amniga iyo la dagaalanka COVID-19.
Dhanka kalena, madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam, ayaa munaasabada 1-da May oo ah maalinta Shaqaalaha adduunka, waxaa uu ugu hambalyeeyay shaqaalaha Jubaland .
Madaxweynaha ayaa si gaar ah hambalyo ugu diray shaqaalaha heeganka ah si gaar ah Ciidamada ku sugan jiida hore iyo dhakhatiirta dagaalka adag kula jira caabuqa COVID19 kuwaas oo naftooda u huraya sidii ay u badbaadin lahayeen Shacabka.
Ciidamada iyo shaqaale waa kala labo, ee Gaylaan weynaan buu magaalo kusoo galay. Qofku haduu iska imaadow yahay isma qarin karo.
Waxaa jira shaqaale rayid ah oo ciidamada la shaqeeya, laakiin ciidamadu dhaqaaale ma has.
CIIDANKU WAA SHAQAALE DOWLADED, MADAXWEYNE WAA SHAQAALE DOWLADED, PM WAA SHAQAALE DOWLADED, SIDAA WAX U OGAW CIDWALBA OO U SHAQEYSA DOWLADA WAA SHAQAALE DOWLADED TEEDAKALE CIIDANKA DARBIGA UMMA SHAQEEYAN
Farah Gaylan wariyaha qarniga ee somaliyeed